ကျမ်းစာကို အွန်လိုင်းမှာ ဖတ်ပါ—အခမဲ့ ကျမ်းစာ ကူးယူပါ- MP၃ အသံဖိုင်, PDF
ဖတ်လို ကက်ချူဝါ (ဟူအေးလာ ဝန်ကာ) ကင်ဘွန်ဒူ ကင်ယာဝန်ဒါ ကန်နာဒါ ကန်ယန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ကမ္ဘောဒီးယား ကရင် (စကော) ကရီအို ကာဇက် ကာတာလန် ကာဘိုင်ယီ ကာရ်ဂီ ကိုစရီယန် ကိုရီးယား ကိုရီးယား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ကိုလံဘီယာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ကီကာအွန်ဒီ ကီကူယူ ကီကွန်ဂို ကီချူဝါ (ကူဇ်ကို) ကီချူဝါ (ဘိုလစ်ဗီးယား) ကီချူဝါ (အန်ကက်ရှ်) ကီချူဝါ (အိုင်ယာကူချို) ကီချူအာ (ဟူအာလာဂါ ဟူအန်ကို) ကီဆီ ကီရီဘာတီ ကီရွန်ဒီ ကီလူဘာ ကော့စတာရီကာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ကဲမ်ဘာ ကျူးဘား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ကွန်ဂို ကွမ်ဂါလီ ကွမ်ယာမာ ကွီဘက် လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကား ခရိုအေးရှား ခရိုအေးရှား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ခိုလ် ခူဘယ်အို ချက် ချက် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ချန်ဂါနာ (မိုဇမ်ဘစ်) ချီချေဝါ ချီတမ်ဘူကာ ချီတွန်ဂါ ချီလီ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ချူအာဘို ဂရင်းလန်း ဂရိ ဂရိ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဂါ ဂါနာ လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကား ဂါရီဖူနာ ဂါလီစီယံ ဂီတွန်ဂါ ဂူဂျရာတီ ဂျပန် ဂျပန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဂျမေကန် လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကား ဂျမေကာ ခရီအိုးလ် ဂျာမန် ဂျာမန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဂျားဗား ဂျော်ဂျီယာ ဂွန် ဂွမ်ဘီယန်းနို ဂွမ်ဟီဘို ဂွာတီမာလာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဂွာရာနီ စင်ဟာလာ စင်္ကာပူ လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကား စန်ဒ စပိန် စပိန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား စရာနန်တွန်ဂို စလိုဗက် စလိုဗက် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား စလိုဗေးနီးယား စလိုဗေးနီးယား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား စီပီဒိုင် စီပူလာနာ စီဘမ်ဘာ စီဘွာနို စော်လမွန်ကျွန်းစု ပီဂျင် ဆက်ဆိုသို (လီဆိုသို) ဆက်ဆွာနာ ဆတင်း-မာဝီ ဆန်ဂို ဆာမိုအာ ဆာလ်ဗေဒိုရန် လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကား ဆားဗီးယား (စီရီးလစ်) ဆားဗီးယား (ရိုမန်) ဆီတွန်ဂါ (မာလာဝီ) ဆီနာ ဆီလိုဇီ ဆေးရှဲ ခရီအိုးလ် ဆွစ် ဂျာမန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဆွာတီ ဆွာဟီလီ ဆွာဟီလီ (ကွန်ဂို) ဆွီဒင် ဆွီဒင် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဇင်ဘာဘွေ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဇန်ဗန်တီ ဇမ်ဘီယာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဇာပိုတက် (အိစ်မတ်စ်) ဇူးလူး ညာနက်ကာ ညွန်ဝီ တက်တွန် ဒီလီ တဂါးလော့ တဆောန်ဂါ တဇော့ဇီလ် တမီလ် တယ်လ်ဂူ တရုတ် ကန်တုံ (ခေတ်သုံး) တရုတ် ကန်တုံ (ရှေးသုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တရုတ် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား တဟီတီ တာဂျီကီ တာတာ တာ့ခ်မန် တိဗ် တိုဂျိုလာဘယ်လ် တိုတာနက် တီခူနာ တီဂရင်ယာ တီရွှာ တီရှီလူဘာ တူဗာလူ တူရကီ တောင်အာဖရိက လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား တောရက်စ် စတရိတ် ခရီအိုးလ် တော့ခ် ပီဆင်း တွန်ဂန် တွီ ထိုင်ဝမ် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ထိုင်း ထိုင်း လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဒတ်ချ် ဒတ်ချ် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဒန်မီ ဒရီဟူ ဒိန်းမတ် နယူးဇီလန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား နာဗာဂျို နိုင်ဂျီးရီးယန်း လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကား နီကာရာဂွာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား နီပေါ နီအာစ် နော်ဝေ ပနားမား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ပန်ချာပီ (ရောမ) ပန်ဂါဆီနန် ပန်ဂျာဘီ ပန်စီဗေးနီးယား ဂျာမန် ပါပီယာမန်တို (ကုရာစောင်း) ပါရာဂွေး လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ပါရှန်း ပိုင်းဇ် ပိုနက်ပီယံ ပိုလန် ပိုလန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ပီရူး လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ပေါ်တူဂီ (ပေါ်တူဂယ်လ်) ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး) ပေါ်တူဂီ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ပြင်သစ် ပြင်သစ် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဖင်လန် ဖလန်းမစ်ရှ် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဖိလစ်ပိုင် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဖီဂျီ ဗင်နီဇွဲလား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဗန်ဒါ ဗီယက်နမ် ဗြိတိန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဘက်စာ (ကင်မရွန်း) ဘင်ဂါလီ ဘစ်လာမာ ဘယ်ဂျီယံ ပြင်သစ် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဘရာဇီး လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဘာတက် (ကာရို) ဘာတက် (တိုဘာ) ဘိုင်ကိုးလ် ဘိုလီးဗီးယား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဘူလ်ဂေးရီးယား ဘေလဇ် ကရီအိုး ဘေအိုးလ် မက္ကဆီကို လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား မက်ကူအာ မက်ဆီဒိုးနီးယား မချုရှီ မမ်ဘွေး‑လွန်ဂူ မလေး မလေးရှား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား မာဒါဂက်စကာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား မာပူဒွန်ဂွန် မာယာ မာရသီ မာရှယ်လ် မာလဂက်စီ မာလာယာလမ် မာလာဝီ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား မိဇ်တက် (ဂီယာယာရို) မိုဇမ်ဘစ် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား မိုတူ မုန် (အဖြူ) မူအာရေး မော်လ်တီစ် မြန်မာ မြန်မာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ယာပါ နွီ ယူကရိန်း ယူရုဂွေး လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ယောရာဘာ ရိုမေးနီးယား ရိုမေးနီးယား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ရုရှား ရုရှား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ရွန်ဂါ ရှိုစာ ရှိုနာ လင်ဂါလာ လစ်သူယေးနီးယား လတ်ဗီးယား လာအိုတရန် လူဂန်ဒါ လူဗာလီ လူအို လွန်ဒါ ဝါရေး‑ဝါရေး ဝီဂူးရ် (ဆီးရီးလစ်) ဝေယူနာအီကီ ဝေါ်လစ်ရှန် သြစတြီးယား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား သြစတြေးလျ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဟင်ဒီ ဟင်ဒီ (ရောမ) ဟန်ဂါတူ ဟန်ဂေရီ ဟန်ဂေရီ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဟီဘရူး ဟီရီ မိုတူ ဟီလီဂေနွန် ဟေတီ ခရီအိုးလ် ဟွန်ဒူးရပ်စ် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အက်စတိုးနီးယား အက်ဖစ်ခ် အင်ဂါ အင်ဇီမာ အင်ဒက်ဘယ်လီ အင်ဒက်ဘယ်လီ (ဇင်ဘာဘွေ) အင်ဒိုနီးရှား အင်ဒိုနီးရှား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အင်ဒေါ အင်းဒီးယန်း လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အင်္ဂလိပ် အစ္စရေး လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အစ်ဘို အဇာဘိုင်ဂျန် အဇာဘိုင်ဂျန် (ဆီးရီးလစ်) အမေရိကန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အမ်ဘာရာ (ခိတ်တီယို) အမ်ဘာရာ (မြောက်ပိုင်း) အမ်ဘွန်ဒူ အမ်ဟာရစ် အယ်လ်ဘေးနီးယား အယ်လ်ဘေးနီးယား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အရှန်နင်ကာ အလာရ် အာဂျင်တီးနား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အာဖရိက အာမေးနီးယား အာမေးနီးယား (အနောက်) အာရဗီ အိုက်စလန် အိုင်စိုကို အိုင်ယာလန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အိုတီတီလာ အိုရိုမို အီကွေဒေါ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အီတလီ အီတလီ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အီလိုကို အူရ်ဒူ အေမာရာ အော့စက်တီယန် အေးဝေး ဥဇဘက် ဥဇဘက် (ရိုမန်)
ကမ္ဘာဦး က. က ထွက်မြောက်ရာ ထွ. ထွ ဝတ်ပြုရာ ဝတ်. ဝ တောလည်ရာ တော. တလ တရားဟောရာ တရား. တရ ယောရှု ယရ. ယရ တရားသူကြီး သူကြီး. သူ ရုသ ရု. ရု ၁ ရှမွေလ ၁ ရှ. ၁ရှ ၂ ရှမွေလ ၂ ရှ. ၂ရှ ၁ ဘုရင်များ ၁ ဘု. ၁ဘု ၂ ဘုရင်များ ၂ ဘု. ၂ဘု ၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၁ ရာ. ၁ရ ၂ ရာဇဝင်ချုပ် ၂ ရာ. ၂ရ ဧဇရ ဧဇ. ဧဇ နေဟမိ နေ. နေ ဧသတာ ဧသ. ဧသ ယောဘ ယောဘ ယဘ ဆာလံ ဆာ. ဆာ ပညာအလိမ္မာ ပညာ. ပ ဒေသနာ ဒေ. ဒေ ရှောလမုန်သီချင်း သီ. သီ ဟေရှာယ ဟေရှာ. ရှာ ယေရမိ ယေ. ယေ မြည်တမ်းစကား မြည်. မတ ယေဇကျေလ ယေဇ. ယဇ ဒံယေလ ဒံ. ဒံ ဟောရှေ ဟော. ဟော ယောလ ယောလ ယလ အာမုတ် အာ. အ ဩဗဒိ ဩ. ဩ ယောန ယန ယန မိက္ခာ မိ. မိ နာဟုံ နာ. နာ ဟဗက္ကုတ် ဟဗ. ဟဗ ဇေဖနိ ဇေ. ဇေ ဟဂ္ဂဲ ဟဂ္ဂဲ ဟဂ္ဂဲ ဇာခရိ ဇာ. ဇာ မာလခိ မာလ. မလ
သမ္မာကျမ်းစာကနေ သိရှိနိုင်ရာများ ကျမ်းဦးစကား သမ္မာကျမ်းစာ အောက်ခြေမှတ်ချက်သုံး အတိုကောက်များ ကျမ်းစာစကားလုံးများ အညွှန်း ခက်ဆစ် နောက်ဆက်တွဲ က နောက်ဆက်တွဲ ခ